I-UP200Ht - I-Handheld Ultrasonic Homogenizer - iHielscher Ultrasound Technology
I-UP200Ht (200W, 26kHz) i-homogenizer ephathwa ngesandla iyingxenye yochungechunge olusha lwe-Hielscher's 200 watt homogenizer ye-25 eza nezinto eziningi ezintsha. Izici ezintsha zibandakanya ukulawulwa kwedijithali nesikrini sokuthinta, ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo, ukusebenza okwenzakalayo kanye nomklamo we-ergonomic kanye nowokuzenzela okusetshenziselwa ukusetshenziswa okuhle nenduduzo okusebenzayo.
Imishini yedivayisi kanye nezihlukahlukene Izesekeli vumela izinhlelo zokusebenza ezahlukene kanye nokwaziswa kokulungiswa kwamapharamitha kakhulu kakhulu. Izinhlelo ezijwayelekile zale divayisi enamandla ye-ultrasonic zikhona i-homogenization, Ukuhlakazeka, emulsification, Ukuhlakazeka, ukuphazamiseka kweseli, i-degassing noma Sonochemistry. I-Hielscher yaklama homogenizer entsha ephathekayo ye-200W ukunika umsebenzisi ukuguquguquka okuphezulu, ukusetshenziswa kalula kanye nezinga elisha lokunemba nokulawula.
Uma kuqhathaniswa nabandulelayo UP200H no-UP200S, idivayisi entsha ye-ultrasonic UP200Ht inezinhlelo eziningi ezengeziwe kanye nobungane obuhle kakhulu bomsebenzisi. I-UP200Ht enegunya lama-Watts angu-200 inika ukusebenza okufanayo nokuthembeka njengoba UP200H no-UP200S, kodwa ihlukile ngokuklanywa kwayo okusha ngokuphelele okunethezeka kakhulu ekusetshenzisweni kwe-handheld nokuma. Ngenxa yokuhlanganiswa okubanzi kwamalungiselelo wepharamitha (ngokuhluka kwe-amplitude, ukucindezela, izinga lokushisa, ukugeleza kweseli, i-sonotrode yeglasi, ...), i-UP200Ht ihlanganisa uhla oluphelele lwezinhlelo zokusebenza, njenge-homogenization, i-emulsification, ukusabalalisa, ukuhlakazeka, ukuphazanyiswa kwamaseli & ukukhipha, i-degassing kanye nezinqubo ze-sono-chemical kanye ne-sono-catalytical - amanani amancane namaphakathi.
Ngokujwayelekile, i-UP200Ht isetshenziselwa ukuhlinzeka nge-sonication yesilinganiso sesampula kusuka ku-0.1 kuya ku-1000mL. I-Hielscher inikeza i-sonotrodes ehlukahlukene kusuka ku-1 kuya ku-40mm ububanzi bephoyinti. Nakuba i-sonotrode engama-40mm idlulisa i-ultrasound ngokushelela phansi endaweni enkulu kakhulu, i-sonotrodes ene-tip ububanzi busebenza kuma-amplitudes aphakeme nangaphezulu, isib. Ngezinhlelo zokusebenza ezilimazayo. I-UP200Ht ingasetshenziswa futhi ekukhiqizeni amanani amancane, ikakhulukazi ekugezeni okuqhubekayo nokusetshenziswa kwamaseli okugeleza kanye ne-sonotrodes efanelekile. Ngokuhambisana ne-flow cell FC7K, le nto ingenziwa i-sonicated ngendlela eqhubekayo yokugeleza, isib. Ngentengo yokugeleza yama-20 kuya ku-200mL ngomzuzu. Ingqamuzana yensimbi yokugeleza engenazinqamuzana ingcindezela kuze kufike ku-5 barg. Ngalokhu, izinqubo zokuxhumana ze-sonication eziqhubekayo zingenziwa ngendlela encane kakhulu. Ngenxa yokwethembeka kwayo nebanga le-IP41, i-UP200Ht ingaqhutshwa amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d), okuvumela ukuthi kusetshenziswe ku-180L ngosuku (kuye ngokuthi isicelo).
Ukusetshenziswa okuphathwa ngesandla noma okubekwe eceleni
I-versatility yedivayisi ye-ultrasonic lab ayikwenziwa kuphela ngokufaneleka kwezicelo ezihlukahlukene kodwa futhi ngokusetshenziswa okuguquguqukayo. Umsebenzisi ukhetha ngokuvumelana nesicelo, imvelo yokucubungula kanye nobude be-sonication, isimo sezulu idivayisi isetshenziswa njengedivayisi yokubamba i-ultrasonic ye-handheld noma ekhonjiwe.
Isikhombimsebenzisi sokulawula sanamuhla
Ukuthuthukiswa okukhulu kusukela ekubukweni kokusebenza kuyisikrini sokuthinta ezinemibala. Isikrini esithintekayo nesithintekayo sendawo senza kube lula ukusingatha, ukulungiselelwa okunembile kwepharamitha yokusebenza kanye nokuboniswa kokusethwa kwamandla we-ultrasound kuqinisekisiwe futhi kuhlangene nenduduzo ephezulu ku-opharetha. Imenyu yokulawula yedijithali inembile ukuyisebenzisa njenganciphise kuzilungiselelo ezisemqoka. Isimo se-amplitude / amandla kanye nemodi ye-pulse ingashintshwa yi-slider touch-slider (ene-1%, 5% noma i-10% ye-snap). Umsebenzisi uthatha isinqumo, uma ekhetha ukuboniswa kwe-amplitude namandla njenge-bargraph enemibala noma inombolo. Okuqukethwe kwedatha okubonisiwe kuncishisiwe ukuba kubaluleke kakhulu kumodi yokubonisa engu-NUMBER ye-BIG esebenzisa umehluko ophezulu kanye namafonti amakhulu ukuze kubonakale ukubonakala.
I-UP200Ht ingalawulwa ngokusebenzisa noma yisiphi isiphequluli esivamile, njenge-Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla, i-mobile IE / Safari usebenzisa i-interface entsha ye-LAN web. Ukuxhumeka kwe-LAN iyi-plug-n-play elula yokusetha futhi akudingi ukufakwa kwesofthiwe. Idivayisi ye-ultrasonic isebenza njenge-DHCP iseva / iklayenti kanye nezicelo noma ibeka i-IP ngokuzenzakalelayo. Idivayisi ingaqhutshwa ngokuqondile kwi-PC / MAC noma isebenzise inkinobho noma router. Ukusebenzisa i-router engenayo i-wireless ngaphambili, idivayisi ingalawulwa kusuka kuma-Smartphones amaningi noma kumakhompyutha we-tablet, isib. I-Apple iPad. Ukusebenzisa ukuthunyelwa kwe-port ye router exhunyiwe, ungalawula UP200Ht yakho nge-inthanethi kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni – i-smart phone yakho isilawuli kude.
Esinye isici esihlakaniphile se-UP200Ht yi-operation nokulawula nge-LAN (inethiwekhi yendawo, bheka ibhokisi elilungile) elenza umsebenzi usebenze futhi ivumela ukucubungula okuguquguqukayo okuphezulu. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini le-SD / le-USB, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ehlanganisiwe ilinganisa izinga lokushisa unomphela kodwa izibani ezimbili ezikhanyayo ze-LED zikhanyisa isampula esithandwayo.
Njengawo wonke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic, i-UP200Ht ifika ne-ohlakaniphile ovame ukuvundisa imvamisa. Uma idivayisi ishintshiwe, i-generator izobona imvamisa yokusebenza efanele. Kuzobe sekushayela idivayisi kule mvamisa. Lokho kuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi nokwethenjwa kwamadivaysi ethu e-ultrasonic. Konke okudingeka ukwenze, ukushintsha uhlelo. I-generator izokwenza ukuhanjiswa kwevama ngokuzenzekelayo ngephiciti yesibili.
I-Ultrasonic Processor UP200Ht
iprosesa ye-digital ultrasonic, ama-watts angu-200, i-26kHz; ukusetshenziswa kwe-handheld nokuma; ukuvama kokuvama okuzenzakalelayo, ukuguqulwa kwe-amplitude kusuka ku-20 ukuya ku-100%, ukushaya kwe-pulse kusuka ku-10 kuya ku-100%, i-titanium phondo Ø 10mm, ukuphakama kwe-amplitude ku-70μm, i-IP41 ibanga, ukugijima okumile okuvikelwe, ukulawulwa kwe-digital, ne-touch-screen ehlanganisiwe i-timer (0.1sec kuya kwezinsuku ezingu-99), ukuvalwa lapho ukufakelwa kwamandla okugcina kufinyelela: Ws, Wh, kWh; ukulinganisa okuzenzakalelayo uma kunesidingo: ukuzimisela kwamandla angenalutho okuthembekile okukhuphuka amandla okukhuphula amandla okufaka amandla, ukurekhoda kwedatha: ukuphakama kwedatha, amandla, isikhathi, izinga lokushisa kwi-SD-Ikhadi langaphakathi (1GB), ukubonisa nokulawula okude ngokuphequlula ku-PC noma i-MAC ngaphandle kwesofthiwe ukufakwa, ukulawula okukude nge-PLC, nge-sensor yokushisa, isibonakaliso sokushisa: ° C, ° F (-50 ° C bis 200 ° C), ukuqapha izinga lokushisa: ukushintsha okuguquguqukayo / kumaphuzu (-50 ° C – 200 ° C), ama-LED esampula ukukhanyisa, ukunikezwa kwamandla: 24VDC, 9A, indawo yokunikezwa kwamandla: 100-240VAC, izindlu zepulasitiki ezilwa ne-bacterial, isisindo: 1300g, i-sonotrode ekhishwa ngesikhwama esisodwa se-torque, icala eliphathekayo kanye ne-manual
i-sonotrode, eyenziwe ngeglasi (DURAN) ne-titanium, Ø26mm (350mm²), cishe. Ubude obuphelele 200mm, cishe. ubude beglasi ingxenye 100mm, intambo yesilisa M6x0.75, ngamasampula kusuka ku-50ml kuze kufike ku-1000ml, isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 0.28
i-sonotrode, eyenziwe nge-titanium, Ø18mm (254mm²), cishe. ubude obuyi-95mm, intambo yesilisa M6x0.75, ye-atomization / ye-spray drying
ububanzi obuyi-12mm, enziwe ngensimbi engenalutho, ubude bezingalo 300mm, ububanzi obuyi 150mm, ubude buka-600mm
ibhokisi lokuvikela umsindo, ingilazi ye-acryl, enentonga ehlukaniswayo Ø16mm, itafula eliguquguqukayo eliqondile, umata olwa nokushibilika, ubukhulu (LxWxH): 29x20x35cm, isisindo: 13kg, ukwahlukanisa umsindo: 22dB (A) abalinganiswa bomoya ovulekile